धेरैको चाहना : बाबुराम वामपन्थी नै रहिरहे हुन्थ्यो - मूल्याङ्कन अनलाइन
धेरैको चाहना : बाबुराम वामपन्थी नै रहिरहे हुन्थ्यो
तुल्सीदास महर्जन | October 25, 2017
माओवादी केन्द्र र एमालेबीच चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकीकरणसम्मको घोषणा हुँदा बाबुराम पनि त्यस अभियानमा आएको पाएर धेरै मानिसहरु खुशी भएका थिए । तर, त्यो खुशी लामो समयसम्म जोगिन सकेन । प्रदेश र संसदको पहिलो चरणको चुनावमा सिट बाँडफाँडको भित्री छलफलमा कुरा मिल्न नसकेपछि बाबुराम वाम गठबन्धनलाई छाडेर कांग्रेससँग चुनावी तालमेलमा लागेका छन् र गोरखा २ मा उनी ‘अब शत्रु कोही रहेनन्’ भनेर कांग्रेस र आफू कुनै कुरामा भिन्न नरहेको उद्घोष गर्दै हिँडेका छन् । अब उनले ‘लोकतान्त्रिक’ गठबन्धनमा प्रवेश गरेका छन् ।
बजारमा अहिले एमाले त ‘हिजैदेखि कम्युनिस्ट थिएन, माओवादी पनि अब रहेन’, वामपन्थ नै नरहेपछि अब केको वामपन्थी गठबन्धन र एकता भनी बहस पनि चल्न थालेको छ । धेरैले वामपन्थी र कम्युनिस्टलाई पर्यायको रुपमा लिने गरेका छन् । त्यही बुझाइ अनुसार यस्तो टिप्पणी आउन र बहस हुन थालेको हो ।
राजनीतिक इतिहासमा कुनै बेला वामपन्थ र कम्युनिस्ट एउटैजस्तो पनि बने र कुनै बेला फरक पनि भए । कम्युनिस्ट त सँधै वामपन्थी नै रहन्छ । तर, वामपन्थी सधैँ कम्युनिस्ट नरहन सक्छ । कम्युनिस्ट बलियो भएको ठाउँ र समयमा वामपन्थ भन्नु नै कम्युनिस्ट हुन्छ ।
‘वामपन्थी राजनीतिले सामाजिक समानता र समानतावादलाई टेवा दिन्छ । यो अक्सर सामाजिक उँचनिचको अनुक्रम (hierarchy) र सामाजिक असमानताको बिरुद्धमा रहन्छ ।’
‘राजनीतिक शब्दहरु “वायाँ” र “दायाँ” (जसलाई वाम र दक्षिण पनि भनिन्छ ।– मू.सम्पादक) फ्रान्सेली क्रान्ति (१७८९–१७९९) को समयमा प्रचलनमा ल्याइएका थिए । ती शब्दहरुले पुरानो फ्रान्सको विधायक र परामर्श सभा (इस्टेट जनरल)मा बस्ने कुर्सीहरुको स्थान व्यवस्थापनलाई बुझाउँथे । जो वायाँपट्टिको स्थानमा राखिएका कुर्सीहरुमा बस्थे उनीहरुले सामान्यतः राजतन्त्रको विरोध गर्थे र क्रान्तिको पक्षमा उभिन्थे । उनीहरु गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा समेत उभिन्थे । जबकि, दायाँ पट्टिका कुर्सीमा बस्ने विधायिकाहरुले पुरानो सत्ताका परम्परागत सँस्थाहरुको समर्थन गर्थे ।’ (विकीपेडिया विश्वकोष)
यसबाट के बुझिन्छ भने “वायाँ” वा “वाम” र “दायाँ” वा “दक्षिण” कम्युनिस्ट बिचारधारा वा मार्क्सवाद जन्मिनुभन्दा पहिले नै आएका शब्दहरु हुन् । अर्थात् वामपन्थ र दक्षिणपन्थको अवधारणा कम्युनिस्ट बिचारधारा वा मार्क्सवाद आविष्कार हुनुभन्दा पहिले नै जन्मिएका हुन् । त्यसैले कम्युनिस्ट र वामपन्थी एकै कुरा होइनन् ।
के कुरा साँचो हो भने कम्युनिस्टहरुमा वामपन्थको विषयवस्तु सधैँ रहन्छ । त्यसैले उनीहरु सधैँ वामपन्थी हुन्छन् । तर, यसको अर्थ यो होइन कि वामपन्थ हुनलाई कम्युनिस्ट नै हुनुपर्छ ।
नेपालको अहिलेको राजनीतिक क्षेत्रमा प्रमुख पार्टीहरु कम्युनिस्ट र कांग्रेस गरी दुई कित्तामा उभिएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरु साँच्चीकै कम्युनिस्ट दर्शन, सिद्धान्त, बिचार र संस्कृति अनुसारका छन् कि छैनन् भन्ने बहस गर्नु नितान्त जरुरी छ । किनकि, मार्क्सवादले परिकल्पना गरेको वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादसम्म नेपाली समाजलाई लैजान साँच्चीकैको कम्युनिस्ट आदर्श सहितको पार्टीको नेतृत्व बिना सम्भव हुन्न । त्यसैले बिद्यमान कम्युनिस्ट पार्टीहरु कम्युनिस्ट आदर्शका छन् कि छैनन् भनी बहस छलफल गरौं । तर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरु वामपन्थी हुन् कि होइनन् भन्ने सवालमा दुविधा हुनु हुँदैन । यिनीहरु पक्कै पनि वामपन्थी पार्टीहरु हुन् । भलै उनीहरुले रोजेको बाटोबाट वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादसम्मको यात्रा तय गर्न नसकिने पनि हुन सक्छ । यो बहसको विषय भयो । तर, उनीहरुले आफ्नै खालको किन नहोस् क्रान्तिको बाटो चाहिँ छाडेका छैनन् । उनीहरु परम्परागत पुँजीवादको वकालत गरिरहेका छैनन् । अर्को, उनीहरुको विरासत र स्कुलिङ भनेको मार्क्सवाद र समाजवादी क्रान्ति नै हुन् । त्यसैले उनीहरु यथास्थितिमा बस्ने वा प्रतिगमनमा जान सक्दैनन् । समाजवादको यात्रामा कहाँसम्म जान सक्छन् भन्ने प्रश्न चाहिँ त रहला । तर, प्रगतिवादी बाटोबाटै उनीहरु बिमुख भए भन्ने चाहिँ होइन । यस हिसाबले उनीहरु कम्तीमा पनि वामपन्थी भएकोमा शंका हुनुहुँदैन ।
यस अर्थमा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरु मिली बनाएको चुनावी गठबन्धनलाई वाम गठबन्धन भएकोमा कुनै दुविधा हुनु जरुरी छैन । र, उनीहरुबीच पार्टी एकीकरणसम्मको कुरा बाहिर घोषणा भइसकेको अवस्थामा भोलि बन्ने एकीकृत पार्टी पनि वाम पार्टी नै हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।
इतिहासदेखि नै दक्षिणपन्थले यथास्थितिको पक्षपोषण गर्दै आएको छ । नेपालको इतिहासमा २००७ सालको क्रान्ति ताका नेपाली कांग्रेस पनि वामपन्थी पार्टी नै भएको बुझ्नुपर्छ । ऊ मार्क्सवादी थिएन । तर, तत्कालीन अवस्थामा यथास्थितिबिरुद्ध उसले जे आन्दोलन गर्यो त्यो कर्मले वामपन्थ नै थियो । विक्रमको ३० को दशकसम्म नेपाली कांग्रेसले आफ्नै शैलीमा कहिले सशस्त्र त कहिले शान्तिपूर्ण रुपमा तत्कालीन सामन्ती राजतन्त्रबिरुद्ध संघर्ष गरी यथास्थितिबिरुद्ध ऊ उभियो । तर, जब उसले राजतन्त्रसँग घाँटी जोडेर मेलमिलापको नीति सहित कम्युनिस्ट वामपन्थीहरुबिरुद्ध खडा भयो र यथास्थितिको पक्षपोषण गर्न थाल्यो, त्यस क्षणदेखि ऊ दक्षिणपन्थीमा फेरियो ।
२०४६ सालमा पञ्चायत हटाउने जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेर कांग्रेसले आफूलाई वामपन्थको राजनीति नजिक त पार्यो, तर त्यसपछाडि लगातार उसले देशका सामन्त वर्ग, दलाल पुँजीपति वर्ग र प्रतिक्रियावादी वर्गहरुसँग हातेमालो गरेर आफूलाई दक्षिणपन्थको पक्का प्रतिनिधिको रुपमा उभ्यायो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेर उसले आफूलाई परिवर्तनकारी सावित गराउन खोजे पनि वास्तवमा उसको त्यो अस्तित्व जोगाउने मेलो मात्र थियो, यथास्थितिलाई छोड्नका लागि होइन । त्यसैले उसले लगातार मुलुकका सत्ताधारी एवं हुनेखाने वर्गहरुको स्वार्थ रक्षार्थ आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आयो । अर्थात् नेपाली कांग्रेसले आफूलाई दक्षिणपन्थको सच्चा प्रतिनिधि र पहरेदारको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
यसको विपरित नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले आफूहरुबीच दर्शन, सिद्धान्त, बिचार र संस्कृतिको सम्बन्धमा फरकफरक बुझाइ र अभ्यासको बावजुद लगातार यथास्थितिबिरुद्ध उभिएर वामपन्थको पहिचान दिँदै आए । त्यसैले यो अर्थमा वामपन्थीहरु दक्षिणपन्थीहरुभन्दा जनमुखी, प्रगतिशील र भविष्यका लागि आशालाग्दा शक्ति हुन् भन्ने कुरामा दुविधा हुनु जरुरी छैन ।
फेरि आउँ अहिलेको गठबन्धन राजनीतिको कुरामा । नेपालका कम्युनिस्टहरुले एकआपसमा मिली अहिले वाम गठबन्धन बनाएका छन् आसन्न चुनावलाई मध्यनजर राखेर । कम्युनिस्टहरुको यो गठबन्धन देखेपछि कांग्रेसले पनि दक्षिणपन्थीहरुलाई मिलाएर दक्षिण गठबन्धन बनाएको छ । यस हिसाबले आसन्न प्रदेश र संसदको चुनावमा पार्टीभन्दा पनि वाम र दक्षिण गठबन्धनबीच कडा टक्कर हुने निश्चित छ ।
२०४६ को जनआन्दोलनदेखि नेपाली आम जनमानसमा वामहरुको आकर्षण बढ्दै गएको स्थिति हो । २०५१ सालमा एमाले पहिलो पार्टी बन्यो । त्यसपछिका समयहरुमा लगातार वामहरु जनमानसमा बर्चश्वको रुपमा नै रहँदै आए । अझ माओवादी जनयुद्धताका छलाङ मार्ने कम्युनिस्ट राजनीतिमा नेपाली जनमानसको ठूलो हिस्सा नै सहभागी भए । कम्युनिस्ट राजनीति मनपराउने जनमानसको हिस्सा बढ्ने क्रम जारी छ, घट्ने क्रम होइन । गत वैशाख, जेष्ठ र असोजमा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा पनि बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई नै रोजे ।
आसन्न चुनावमा वामपन्थीहरुको बर्चश्व हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा पूर्व माओवादी नेता डा. वावुराम भट्टराई भने दक्षिणपन्थीहरुको लोकतान्त्रिक (?) गठबन्धनको एक हिस्सा बन्न गएका छन् । दश वर्षसम्म जनयुद्धलाई हाँकेका र गणतन्त्र आइसकेपछि कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भएका उनले मार्क्सवादलाई छाड्नुलाई नै नेपाली जनताले पचाउन सकेका छैनन्, अहिले दक्षिणपन्थीहरुको गठबन्धनमा आफूलाई छिराएर र ‘अब कोही शत्रु रहेन’ भन्ने अभिव्यक्तिका साथ दक्षिणपन्थको कित्तामा उनी गएकोलाई नेपाली जनताले निको मान्न सक्ला भन्ने विश्वास नलिए हुन्छ । हुन सक्छ उनले बाहिर भनेजस्तै चुनावी सिट मिलाउने सन्दर्भमा उनलाई ठूला पार्टीहरुले न्याय गर्न नसकेका होलान् । तर, त्यसको बदलामा उनले वर्ग विभाजित समाजमा ‘अब शत्रु कोही रहेन’ भन्दै दक्षिणपन्थलाई मित्रु र वामपन्थलाई शत्रुको व्यवहार गर्नुले उनको वर्गीय पक्षधरताको छलाङ नै हो भन्ने कुरा बुझ्न कसैलाई धेरै समय लाग्दैन ।
गोरखा २ मा वामपन्थको तर्फबाट संसदीय चुनावमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ उम्मेदवारको रुपमा खडा भएका छन् । उता दक्षिणपन्थीहरुको समर्थनमा वामपन्थी उम्मेदवारलाई हराउने उद्देश्यका साथ डा. वावुराम भट्टराई उम्मेदवार बनेका छन् । खासमा भन्ने हो भने दक्षिणपन्थको प्रतिनिधिको रुपमा उनी उम्मेदवार बनेका छन् । गोरखाली जनताले मात्र होइन, आम नेपालीहरुले नै डा. वावुराम भट्टराई कम्युनिस्ट रहिरहन नसके पनि कमसेकम वामपन्थीसम्म भइरहून् भन्ने चाहेका थिए । तर, उनी जनचाहनाको न्यूनतम पोजिशनमा पनि रहन सकेनन् । उनी वामपन्थको कित्ता छाडी दक्षिणपन्थको कित्तामा बस्न गए । यो अत्यन्त दुःखद कुरो त भयो नै अब उनलाई गोरखाली जनताले मतको आधारमा कुन पोजिशन दिने हो त्यो हेर्न मंसिर १० सम्म कुरौं ।
विचार/विश्लेषण No Comments » Print this News
« पुनःनिर्माणमा आर्थिक अभाव भए अर्को दाता सम्मेलन : भुसाल (Previous News)
(Next News) डायनोसरको समयको इक्थायोसरको जीवाष्म भारतमा पहिलोपटक भेटियो »
परिणाम घोषणामा निर्वाचन आयोगले गरेको लामो अलमल र सुस्तीपछि चुनावी जनादेशअनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीपूरा पढ्नुहोस्
हाउगुजी नै सही माओवाद मान्य भएन एमालेलाई
केपि ओलीको नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको सरकार बनाउँदै गर्दा एउटै पार्टी बनाउने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमापूरा पढ्नुहोस्
मेरो दृष्टिमा घनश्याम ढकाल
कोमल ओलीको डाह गर्ने कि राजनीतिको दिशाबारे चिन्तित हुने ?
पृथ्वीनारायण राष्ट्रनिर्माता होइनन्
एमाले-माओवादी एकतापछि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको सम्भावना